SAWIRRO:-Raysalwasaaraha Itoobiya oo booqday xarunta satelite-ka Itoobiya ee dalka China |
Raysalwasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed ayaa booqday xarunta satelite-ka itoobiya lataagayo ee dalka china-ha
Satelite-kan oo hoostaga Macadka culuumta dayaxgacmeedyada iyo aaladaha casriga ee itoobiya (E.S.S.T.I) ayaa lasheegay inay dawlada shiinuhu itoobiya kacaawinayso islamarkaana diyaargaroow loogu jiro sidii dhamaadka sanadka dambe Samada loogu diri lahaa.
Xogta Xafiiska R/wasaaraha JDF itoobiya ayaa Tilmaamaysa in satelite-kan loo adeegsan doono; Qorshayaasha beeraha, Taxadarka iyo udiyaar garoowga abaaraha, maamulka kaymaha iyo odoroska /daraasaadka xaalada isbadalka cimilada.
Geeska kale, ayaa dawlada shiinaha ayaa cadaysay inay itoobiya Kataageerayso Mashruuca Qurxinta Sheger iyo Barnaamijka horumarinta jiinka wabiyada, islamar ahaantaana ay Addisababa kafulinayaan jid 12K.M ah iyo Xarunta baabuurta kukala wareegto oo Mashruucan horumarinta jiinka wabiyada iyo Qurxinta sheger hoos imanaya.
Sidookale, Dr Abiy ahmed oo booqday Macadka dhismaha magaalooyinka,Qorshaynta iyo daraasaadka china-ha ayaa Sheegay in Qorshaha hormarinta iyo naqshadaynta ee uu macadku udiyaariyey Mashruucan horumarinta jiinka wabiyada iyo Qurxinta sheger uu yahay mid sibuuxda loogu kalsoonaankaro.
Ugu dambayntiinta Raysalwasaare Dr Abiy Axmed oo Bogaadiyey Fikirka injineerada ee Naqshada barnaamijka Qurxinta Addis ababa islamarkaana sheegay in Naqshadu kusalaysan tahay Xaalada guud ee Magaalada ayaa hawl-wadeenada siiyey jihooyinka ay Mustaqbal ku hawl gelidoonaan.